အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတဆ်ကျွမ်းလိုသော် – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတဆ်ကျွမ်းလိုသော် – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတဆ်ကျွမ်းလိုသော် – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်
Posted by kai on Jan 28, 2018 in Contributor, Columnist, Literature/Books, Myanmar Gazette | 1 comment
နှစ်ဆန်းကာလ မှာ စာဖတ်သူအားလုံး ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ ဦးစွာပထမဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ယခင်လက Negative adverbs လေးတွေအကြောင်း အစဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလမှာဆက်လက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးပါမယ်။
ပထမဆုံးဖော်ပြလိုတာက လေ့လာသူတော်တော်များများ မှားယွင်းစွာသုံးစွဲတတ်တဲ့ hardly ဆိုတဲ့ adverbs လေးဖြစ်ပါတယ်။
“He works hardly, so he gotapromotion.” လို့သုံးစွဲတာမျိုး ကိုတွေ့ဖူးကြပါလိမ်မယ် ။ ဒီနေရာမှာ Hard က adjective ဆိုးတော့ adverbs ဖြစ်အောင် –ly လေးထည့်လိုက်ရင် ပြီးတာပဲဆိုပြီးသုံးတော့ မှားကုန်တာပေါ့ ။မှတ်မိ ကြတယ်နော်။ Hard ကို adjective လိုရော adverbs လိုပါ သုံးလို့ ရပါတယ်။–ly ထည့်ပြီး hardly လို့ ပြောင်းသုံးစရာမလိုပါ။ အမှန်က “He works hard, That’s why he gotapromotion.”လို့ ရေးမှမှန်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ hardly, rarely, scarcely, barely တို့ အားလုံးကို negative adverbs လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဒီလို ခေါ်ရလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားအောင် အောက်ပါဝါကျလေးများကို ကြည့်ပါ။
-“He is rarely home.He is almost never home.”
-“I hardly know my boss.I don’t know him very well.”
-“There’s scarcely any sugar left. We are almost out of sugar.”
ပထမဝါကျမှာ “သူ့ရဲ့ အထက် အရာရှိ အကြောင်းသူဘာမှသိပ်မသိပါဘူးတဲ့။”ဒုတိယဝါကျမှာ ကျတော့”သူအိမ်မှာရှိခဲပါတယ် အိမ်မှာမရှိတာ များပါတယ်ပေါ့ ” တတိယဝါကျမှာ ကျတော့” သကြားကုန်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။” လို့ဆိုပါတယ်။ ဝါကျသုံးခုစလုံး ဟာ negative ဝါကျတွေဆိုတာ ရှင်းပါတယ်နော်။ နောက်ဆုံး barely ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးကိုတော့ မြန်မာအမျိုးသားလေးများ သိကိုသိသင့်ပါတယ်။ ဒို့ မြန်မာလူငယ်လေးတွေက ယဉ်လည်းယဉ်ကျေးကြတယ် ။ရုပ်ရည်ရူပကာလည်း ခပ်ချောချော ခပ် ခန့်ခန့်ဆိုတော့ American လှပျိုဖြူလေးတွေရဲ့ အထူးအရေးပေးမှုကို ခံယူရလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ Barely legal လို့ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ၁၈နှစ် ၁၉နှစ်သာသာ မိန်းကလေးတွေကို အထူးသတိထားပြီး ရှောင်ကြပါလို့ မှာလိုပါတယ် ။ မရှောင်တတ်လို့ မှား ပါရင် ကျူးလွန်မိရင် မိန်းကလေးက ၁၈နှစ်ကျော်ရင်တော်ပါသေးရဲ့ ၁၈နှစ်အောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ထောင်ကျရုံမက ဘဝတစ်လျှောက်လုံး sexual predator အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်အထိ ဒုက္ခလှလှရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ negative adverd မဟုတ် သော်လည်း ထူးခြားတဲ့ အခြား adverb တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ adverb တွေထဲမှာ pretty ဆိုတဲ့ Adverb လေးကို အထူးဂရုပြုမိဖို့လိုပါတယ်။ pretty ဆိုတော့ ‘လှပသော’ဆိုတဲ့ adjective နဲ့ တစ်ချို့က မှားကြပြန်ရော။ ဥပမာ-
” she’sapretty girl” ဆိုတဲ့ ဝါကျလေးမှာ pretty ဟာ ” လှပသော ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ adjective လေးပါ။ ဒါပေမယ့် “She’s pretty cute.” ဆိုတဲ့ဝါကျလေးမှာ pretty ဟာ cute ‘ချစ်စရားလေး’ဆိုတဲ့ adjective ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adverb လေးဖြစ်ပါတယ်။ လှပသောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လုံးဝမဟုတ်ပါ။’တော်တော်လေးချစ်စရာကောင်း’တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဒီတော့ American မလေးတစ်ယောက်က မိမိကို “you areapretty good boss.” လို့ ဆိုလာခဲ့ရင် ‘ဟေ့၊ ငါ့လိုယောက်ျား အရင့်အမာကြီးကို လှပတယ်ဆိုပြီး ဘာစော်ကားတာလည်းဆိုပြီး ဆွဲမထိုးလိုက်ပါနှင့်’။ မင်းတော်တော်တတ်တာပဲလို့ ချီးကျူးတာပါ။ pretty နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆင်တဲ့ adverb လေးတွေကတော့ quite နဲ့ very တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ-“He’s very good writer.”
-“She’s quite popular among the students.”
ပထမဝါကျမှာ Very ဟာ good ဆိုတဲ့ adjective လေးကို အထူးပြုနေတဲ့ adverb ပါ။ ဒုတိယဝါကျမှာ quite ဟာ popular ဆိုတဲ့ adjective လေးကို အထူးပြုနေတဲ့ Adverb လေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသိထားသင့်တဲ့ Adverb လေးတွေကတော့ recently, actually, really, formally တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ recently ဆိုတာ မြန်မာလိုတော့ ‘မကြာသေးခင်ကတို့ဖြစ်ကြပါတယ်’ပေါ့။ ‘မကြာသေးခင်’ကဆိုတာ recently ပါတဲ့ ဝါကျမှာ past tense ကိုသာ သုံးမိဖို့ သတိထားရပါတယ်။
ဥပမာ-“Recently, she won the lottery.”
-“Recently, he graduated from the University.”
– “She recently broke up with her boyfriend.”
Actually နဲ့ really တို့ဟာ တကယ်တော့ အဖြည့်ခံလေးတွေပါ။ အဖြည့်ခံလို့ ခေါ်ရတာက အဓိပ္ပါယ်တိတိကျကျမရှိဘဲ တစ်ဖက်သားရဲ့စကားကို ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ ထောက်ခံပေးတဲ့သဘော သက်သက်သာရှိလို့ပါ။ မြန်မာလိုတော့”ဟုတ်လား”။ တကယ် လား”ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေပေါ့။
ဥပမာ -Mg Mg: “The general boughtahelicopter for his son with the money he stole from the Burmese People.”
-Ma Su: “Really!That’s terrible.”
-Mg Mg: “Actually, it was for his grandson, not his son.” Ma Su: “whatever! He should be ashamed of himself.”
Formerly ဆိုတဲ့ Adverb လေးရဲ့အဓိပ္ပါယ်က မြန်မာလိုတော့”အရင်က”ပေါ့။ ဥပမာ- Formerly, he was the Minister of Foreign Affairs.” အရင်တုန်းက သူဟာ နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးပေါ့နော်။ တကယ်တော့ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှက်ဖို့တောင် ကောင်းသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝိုင်းဝန်းဖျတ်ဆီကြသူများအနက် ခေါင်းဆောင်နေရာက ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုကာ တွေးမိရင် ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ် ။ နောက်ထပ်သိထားသင့်တဲ့ adverb လေးနှစ်ခုကတော့ fortunately နဲ့ unfortunately တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ luckily နဲ့ Unluckily လို့လည်း လူသိများပါတယ် ။သုံပုံသုံးနည်း သဘောပေါက်သွားအောင် ဖော်ပြပါဥပမားလေးတွေကိုကြည်ပါ။
-“He was arrested by the military for his political views. Fortunately, he escaped to the West and now lives in the United States.”
– “He was appointed Minister of Education by the military despite of the fact that he doesn’t even haveadegree. Unfortunately, he was removed from office after Aung Sun Su Kyi came to power.”
ပထမ ဝါကျမှာ စစ်အစိုးရက သူ့ကိုနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းလိုက်ပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာ သူအနောက်နိုင်ငံကို လွက်လာခဲ့ပြီး အခုအမေရိကမှာ နေထိုင်နေတယ်ပေါ့ ။ ဒုတိယဝါကျမှာတော့ သူမှာ ဆွဲဆောင်မှုမရှိပေမယ် စစ်အစိုးရက သူ့ ကို ပညာရေးဝန်ကြီးခန့်လိုက်တယ် ။ ကံဆိုးချင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အာဏာရလာပြီး သူရာထူးကပြုတ်သွားတယ်ပေါ့ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Consequently ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးကို သုံးတတ်အောင်လေ့လာကြရအောင်။ မြန်မာလူူမျိုးမှန်ရင် အကျိုးနဲ့ အကြောင်းကို နားလည်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။
ဥပမာ- “He was always late to work. Consequently, he was fired from his work.”
အလုပ်ကို အမြဲတန်းနောက်ကျနေလို့ နောက်ဆုံးအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။ နောက်ကျခြင်းက အကြောင်း။ အလုပ်ပြုတ်တာက အကျိုးပေါ့နော်။ ထားပါတော့လေ နှစ်သစ်ကြီးမှာ ဒီလိုနိဂုံးချုပ်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ဒီတော့
“He worked hard every day. Consequently, he was promoted to the position of Senior Manager.”
ဒါကမှပိုကောင်းတာပေါ့။ အလုပ်ကြိုးစားလို့ ရာထူးတိုးသွားတယ်ပေါ့။ ဒို့မြန်မာတွေက ဒီဝါကျမျိုးနဲ့မှ ကိုက်ပါတယ်။ ကဲနောက်လမှ ဆက်လက်၍ သဒ္ဒါအကြောင်း ဖော်ပြပါဦးမယ်။